Indonezia: Môske-n’ny polisy nokendrena mpanapoaka tena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2011 12:58 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nisy mpanapoaka ny tenany amin'ny baomba iray nanafika ny môskea Adz-Zikro izay ao anatina faritra marolafin'ny polisy ao an-tanànan'i Cirebon tany Indonezia tamin'ny Zoma 15 Aprily lasa teo. Ampolony no naratra nandritra vavaka isan-joma nipoahan'ny baomba. Indonezia moa no firenena be mponina maro miozolomana indrindra manerantany, ary tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia tafihana vondrona mpampihorohoro maherisetra ity firenena ity.
Ao amin'ity lahatsary am-pinday izay navoaka tao amin'ny YouTube ity no ahitana ny tao anatin'ny môskea vantany vao nisy ny fanapoahana baomba.
Nahagaga olona maro any Indonezia ity fanafihana ity indrindra ho an'ireo izay mampifandray ny fanapoahana baomba amin'ny vondrona Islamika fanatika. Saingy tsy mahazatra kosa izany famonoan-tena manapoaka baomba toy ny tany Cirebon izany rehefa ny trano fivavahana miozolomana indray no kendren'ny mpampihorohoro.
Manontany i Multibrand hoe nahoana moa no tafiditra tanaty môske tsy voasakan'ny polisy ilay mpanapoaka baomba:
Rantau Pincono moa nanentana ny olona, ary anatin'izany ny fampahalalam-baovao, tsy hampifandray avy hatrany ity fanapoahana baomba ity amina vondrona islamika:
Forum Demokrasi mino fa tsy mifandraika amin'ny resa-pivavahana ity asam-pampihorohoroana farany ity:
Keluarga-Madinah nanamarika ny tatitra nataona fahitalavitra iray fa mety ho misy fiokoana komonista ao anatin'ity fanapoahana baomba ity:
Misy tantara hafa mahaliana ao ambadik'ity raharaha ity. Ny Printsy Raja Mochamad Saladin, zokiolona tao amin'ny Sultanat Kanoman, dia nanamarina fa ity mamono tena manapoaka baomba Muchammad Syarief ity dia manana ràn'andriana avy ao amin'ny lapam-panjaka Kanoman. Avy amin'ny reniny no ananan'i Muchammad Syarief tetiharan'andriana saingy napetraky ny ao an-dapa ho olo-tsotra izy satria nanambady olo-tsotra ny reniny. Saingy, noho ny fihetsika tsy nety nataony, dia nolavin'ny tao an-dapa ny handevina azy ao amin'ny fasan'andriana. Na izany aza, hatramin'izao dia tsy mbola mahita porofo mampifandray ny heloka bevava amin'ny fianakaviam-panjaka ny polisy.